Famerana ny tsena :: Nahazo ny anjarany ireo mpivarotra amoron-dalana • AoRaha
Nahafaly an’ireo mpivarotra amoron-dalana ny tohana nomen’ny Filohan’ny Repoblika ho azy ireo noho ny fepetra amin’ny fihibohana sy famerana ny tsena eto andrenivohitra vokatry ny ady amin’ny valanaretina Coronavirus. Natao teny Ampefiloha ny fizarana an’ireo fanomezana ho an’ny mpivarotra amoron-dalana, omaly. Notanterahina omaly ihany koa ny fanomezana ny anjaran’ireo mpanasa lamba sy ny mpivarotra gazety, teny Ankorondrano.
Vary, voamaina ary kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro samihafa no notsinjaraina. Miisa arivo mahery ireo mpivarotra. Ny antsasany no nahazo ny anjarany omaly maraina. Anio kosa ny fizahana amin’ny ampahany hafa anio. « Ny tsy fahafahanareo miasa amin’ny andavanandro no anton’izao fanampiana izao », hoy ny Filoha Rajoelina Andry teny Ampefiloha.
Lasibatry ny fiatoan’ ny sehatrasa maro noho ny fidiran’ny valanaretina « Coronavirus » eto amintsika ny mpivarotra amoron-dalana sy ireo mpanao asa tena hafa, toy ny mpanasa lamba sy mpivarotra gazety. « Mahafaly ny fisian’ny fitsinjovana toy izao ». hoy ireo mpvarotra amoron-dalana.
Fivoaran’ny toe-pahasalamana :: Mitombo ny soritr’aretin’ireo olona 11 voan’ny « coronavirus »
Tan-tsoriky ny fanjakana :: Haterina isam-baravarana ny fanampiana ho an’ny mpianatry ny oniversite